DAAWO: Maxay ka dhigan tahay shaacinta Liiska Xildhibaanada rasmiga ah ee Jubbaland?
KISMAAYO(P_TIMES) – Guddiga Doorashooyinka iyo Xaduudaha ee Jubbaland ayaa si rasmi ah xalay u shaaciyey liiska ay ku qoran yihiin magacyada mudanayaasha baarlamaanka 2aad ee Jubbaland, waxaana si weyn loo hadal-hayaa liiskan oo ay ku soo baxeen mudanayaal badan oo kucusub baarlamaanka.
Isimadda beelaha Jubbaland ayaa soo gudbiyey liiskan badankiisa, waxaana meesha ka baxay wararkii sheegayay in Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu isagu lahaa ujeedada xulitaanka xubnaha baarlamaanka ee Jubbaland.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay baarlamaanka cusub iskugu jiraan kuwa hore, Odayaal waayo arag ah iyo dhalinyarro, taas oo ka dhigan in ay ku dhan yihiin dhammaan qeybaha baarlamaanka Jubbaland.
Mucaaradka diidan doorashada Jubbaland, waxay dhankooda soo saareen liis ay ku qoran yihiin magacyada xildhibaano gaaraya 75 xildhibaan oo u badan dhalinyaro kusugan magaalada Muqdisho oo baraha bulshada si weyn ugu maagi-jiray maamulka Jubbaland.